Irabha oluludaka Pump Body (istili) ziyatshintshana kunye Warman SPR series ngerabha nkqo oluludaka neeMpompo Sinikezela ezahlukeneyo istili irabha, Ukuze abathengi isicelo kwiindawo ezahlukeneyo entsonkothileyo. Uhlobo lweZinto zeRabha ze-YAAO® kunye neeNkcazo zeDatha INkqubo ye-YAAO yeNdawo Igama leNkcazo: Uhlobo lwe-YR26 Anti-Thermal Breakdown Rubber Natural Rubber YR26 yirabha yendalo emnyama, ethambileyo. Kuye nokumelana ophezulu ukhukuliseko kuzo zonke ezinye izinto kwizicelo oludaka yamasuntswana. I-antiox ...
* Sinikezela iikholamu ezinobungakanani obahlukeneyo ukuze uqiniseke ukuba ungazisebenzisa nakweyiphi na ubunzulu obungaphantsi komhlaba * Inkqubo yerabha yokuncamathela eyahlukileyo ukuhlangabezana nazo zonke iintlobo zemithombo yeendaba eneasidi * I-flange esemgangathweni ophezulu, umngxunya oqhelekileyo, indawo efanelekileyo kunye nokukhawulezisa ukufakela ii-SPR nkqo zempompo Itshathi yolwakhiwo * I-SPR Slurry Pumps Column data Model Model Back Liner code Rubber material (RM) 40PV-SPR PVR4102 * R26, R55, R33, S01, S10, S12, S31, S42 600.900.1200.1500.1800.1800 65QV-SPR QVR65102 * R26, R55, R33, S ...
I-impeller ineendinyana ezinkulu ezivulekileyo kwaye inokudlulisa islryry ngokufanelekileyo, ibonelele ngokulungeleleneyo kunye nokuma okungafaniyo ukufezekisa ukungcangcazela okuncinci kunye nengxolo ephantsi ekusebenzeni. -Uhlobo oluvulekileyo lokunyanzela lubonisa ukusebenza ngokukuko okuphezulu kwaye kunqabile ukuba lunxitywe kwingingqi ye-liner yangaphambili. -Umveliso ophakamileyo, ukwanda kwengeniso kunye nokugcinwa kokulungiswa -Ukunyanzeliswa okuphindwe kabini kudala imithwalo ethwele i-axial ephantsi, ukwandisa ubomi bokuthwala * I-SPR yeRabha ebekwe nkqo yedreyini yeeMpompo yedatha ...
* Sinikezela ngombhobho wokukhulula wobungakanani obahlukeneyo ukuqinisekisa ukuba ungawusebenzisa nakuphi na ubunzulu obungaphantsi komhlaba * Umgangatho ophezulu wesitshixo, umngxunya oqhelekileyo, ukufakela okulula ngakumbi nokukhawulezayo * Inkqubo yerabha yokuncamathela eyahlukileyo ukuhlangabezana nazo zonke iintlobo zeasidi-isiseko sohlobo lwe-SP \_ Iimpompo ze-SP (R) zimi nkqo, iimpompo zentsimbi esecaleni ezifakwe kwisump yokusebenza. Ziyilelwe ukuhambisa isirri esirhabaxa, enkulu kunye nokuxinana okuphezulu. Ezi mpompo azifuni naluphi na uphawu lweshafti kunye nokutywina amanzi. Banga ...
Iimpawu zempompo ye-slurry ethe nkqo ye-SPR: 1) Ukusebenza okuphezulu okungavaliyo Ukuyilwa ngokukodwa okukodwa, isango elineminyango emibini, imodeli yokuvula, imodeli yokuhamba kabini yamagqabi isebenza kakuhle ngaphandle kwebhlokhi, indawo yokupompa njl.njl. Ukugqibezela nge-impeller kunokukhethwa kunye nezixhobo zabo kunye neemodeli kumajelo eendaba ahanjisiweyo kwaye unokuqinisekiswa ngokusebenza ngokugqibeleleyo kwe-hydraulic kunye nokusebenza kubomi ekuthuthweni kweendaba ezinokutya okuziinkozo okumisiweyo ...
Iinxalenye zerabha ezimanzi zinxiba kakhulu ukumelana nokumelana, zihlala zisetyenziselwa iimeko zokusebenza zeasidi. Ezifana tailing kushishino lwezemigodi, oluludaka kunye amasuntswana amancinci kwaye akukho imiphetho rough. Indawo yonke yokuhamba ibandakanya i-Cover Plate Liner, i-Throat bushing, i-Frame plate liner, i-Frame Plate Liner Insert. Izinto zerabha esasizisebenzisayo sinokunganyangeki kakuhle kuzo zonke ezinye izinto kwizicelo zodaka olulungileyo. I-antioxidants kunye ne-anti degradents ezisetyenzisiweyo kwimathiriyeli yethu ziye ...
Impahla zerabha zokumpompa oluludaka ziyinxalenye emanzi kwiimpompo zedreyini emgceni eyalela iseleri kwindawo yokupompoza. Uninzi lweempompo zedreyini eneempompo zisebenzisa ukwahlula-hlula kohlobo lweerabha zerabha, enye yipleyiti yesakhelo, kwaye enye sisiciko sepleyiti, olu lwakhiwo luyilelwe ukwenza ukubuyisela kube lula. Impahla yethu yerabha yempompo edityanisiweyo iqhele ukwenziwa ngerabha ye-R55 yendalo enika amaxesha angama-1.5 ubomi benkonzo yerabha yesiqhelo eyi-R26. * L-Uhlobo oluludaka Pumps impeller Data Model Impeller khowudi ...
L-Uhlobo oluludaka Pump Cover Plate nqanawa
Amacandelo e-hydrocyclones e-100% atshintshisanayo kunye neemveliso ezidumileyo zehlabathi. Umgangatho ophezulu we-R55 yerabha usetyenzisiwe i-YAAO izibophelele kukugqwesa kwinkonzo yabathengi kunye nolwaneliseko. Sinikezela ngokhetho kubathengi bethu kwaye ngokusebenzisa i-hydrocyclone wear linings, sijolise ekunciphiseni ixesha kunye neendleko kunye nokufezekisa ukusebenza ngokungaguquguqukiyo kweehydrocyclones zakho. Iimpawu kunye neNzuzo yeYAA Hydrocyclone Liner ibonakalise umgangatho wayo ophezulu kunye nokusebenza kweendleko kukusetyenziswa ebaleni kwabaxhasi bethu ...
Intshayelelo Product Impompo oluludaka impeller angadlala indima ebaluleke kakhulu ekusebenzeni kwempompo oluludaka. Ngokujikeleza, inokunceda impompo oluludaka ukuhlangabezana neemfuno zezixhobo. Impompo yokugungxula impompo kulula ukugqitywa, ngenxa yoko sikhangela izixhobo ezizodwa zokwandisa ixesha lokuphila kwe-impeller. Irabha oluludaka impompo impellers zisetyenziselwa ukujongana oluludaka bako kunye amasuntswana buthuntu. Zenziwe ngerabha yendalo, irabha eyenziweyo, i-EPDM Irabha, iNitrile ngerabha, okanye nayiphi na enye njenge ...
Iinxalenye zerabha ezimanzi zinxiba kakhulu ukumelana nokumelana, zihlala zisetyenziselwa iimeko zokusebenza zeasidi. Ezifana tailing kushishino lwezemigodi, oluludaka kunye amasuntswana amancinci kwaye akukho imiphetho rough. Indawo yonke yokuhamba ibandakanya i-Cover Plate Liner, i-Throat bushing, i-Frame plate liner, i-Frame Plate Liner Insert. Izinto zerabha esasizisebenzisayo sinokunganyangeki kakuhle kuzo zonke ezinye izinto kwizicelo zodaka olulungileyo. I-antioxidants kunye ne-anti degradents ezisetyenzisiweyo kwizinto zethu zinenyosi ...
Oluludaka Pump Expeller Ring isetyenziselwa AH / HH / L / M oluludaka iimpompo, le ring umgxothi kunye umsebenzi kunye expeller ukuba iimpompo oluludaka. Abakwazi ukunceda ukutywina impompo kuphela, kodwa banciphise namandla e-centrifugal. Uyilo kunye nezinto ezibonakalayo ze-expeller zibalulekile kubomi bayo benkonzo Le tywina ilungele uninzi lwezicelo zokumpompa. Inika uncedo olukhulu lokuba akukho manzi e-gland ayimfuneko. Umkhupheli obaleka iringi yento efanayo kwaye esebenza ngeevanes ngasemva f ...